NgoJulayi 2020-Funda ukuRhweba
Inyanga: July 2020
IJapan 225 (JP225USD) iqala kwakhona ukuHamba ezantsi, ingafikelela kwinqanaba le-21400
Ukuhlaziywa: 31 Julayi 2020
Iindawo eziKhuselekileyo: 23200, 23600, 24000
Iindawo eziNkxaso eziPhambili: 20800, 20400, 20000
IJapan 225 (JP225USD) yexesha elide: Ukuma
IJapan 225 iboshwe ngamanqanaba phakathi kwamanqanaba 22000 kunye nama-23000. Ixabiso liphule inqanaba lama-22000 kwaye intshukumo esezantsi isenokuqhubeka. Kwicala elisezantsi, ukuba ixabiso liphula umgca wenkxaso kwaye livalwe ngaphantsi kwalo, uxinzelelo lokuthengisa luya kuqhubeka.
I-JP225USD-Itshathi yemihla ngemihla
IJapan i-225 iwele kwinqanaba lama-41 kwi-Relative Strength Index. Isalathiso sikummandla wedowndrend kwaye ngoku siyawa. I-SMA yeentsuku ezingama-21 kunye nee-SMA zeentsuku ezingama-50 zijikeleza ecaleni libonisa imeko esecaleni.
IJapan 225 (JP225USD) yeXesha eliPhakathi leTrend: Bearish
Kwitshathi yeeyure ezi-4, isalathiso sisezantsi. Umzimba wekhandlela oluhlaza uvavanye inqanaba lokubuyiselwa kwe-0.382 Fibonacci. Ibonisa ukuba isalathiso siya kuwa kwaye sifikelele kwinqanaba eliphantsi kwinqanaba le-2.618 yokwandiswa kweFibonacci. Nangona kunjalo, ujoliso lokuqala luya kuba kwinqanaba lokunyusa le-1.618. Ithagethi yesibini iya kuba kwinqanaba lokwandiswa kwenqanaba 2.618 okanye inqanaba 21400.
JP225USD-4 Itshathi yeYure
IJapan i-225 ingaphantsi kwe-20% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Ibonisa ukuba intengiso ifikelele kwindawo ethe kratya kwintengiso. Oku kubonisa ukuba ixabiso likwi-bearish umfutho. I-SMA yeentsuku ezingama-21 kunye nee-SMA zeentsuku ezingama-50 zithambeka emazantsi.
Imbonakalo Jikelele yeJapan 225 (JP225USD)
Isalathiso saseJapan sama-225 siyehla emva kokuhamba ecaleni kweenyanga ezimbini ezidlulileyo. Imakethi iyawa kwaye kulindeleke ukuba ifikelele kwinqanaba eliphantsi le-21400.
tags Japan 225, JP225USD, Uhlalutyo Technical
Uqoqosho lwaseCanada lukhula nge-4.5% ngoMeyi ngokuchasene ne-3.5% ekulindelwe ngayo
Ingxelo yangoLwesihlanu yezoqoqosho igqamisa ukukhutshwa kwedatha yokukhula kweGDP yenyanga eCanada ngoMeyi, ekhutshwe yiStatistics Canada ngo-12: 30 GMT. Emva kwesivumelwano esibukhali se-11.6% kwinyanga ephelileyo, ingxelo kulindeleke ukuba ibonise ukuba uqoqosho lwaseCanada lukhule nge-3.5% kwinyanga yokunika ingxelo.
Nangona kunjalo, emva kokukhutshwa, eyona mveliso iyinyani yaseCanada (GDP) inyuke nge-4.5% ngenyanga ngenyanga kaMeyi, idatha ekhutshwe yi-Statistics Canada ngolwe-Sihlanu. Oku kufundwa kulandela ukusika kwe-11.7% ka-Epreli (ehlaziyiweyo ukusuka kwi-11.6%) kwaye yaphuma ingcono kancinci kunentengiso ekulindelwe ukuba izuze i-3.5%.
I-USD / i-CAD yabonwa idibanisa intshukumo elungileyo yosuku lwangaphambili ngaphezulu kwe-100 pips ezivela kwimimandla ye-1.3330, okanye iiveki ezisixhenxe ezantsi. Ngenxa yokuba isenzo sexabiso lwamva nje siqhutywa kukushukunyiswa kwamaxabiso eedola zaseMelika, le datha ayinakulindeleka ukuba ijike izinto kwiminyhadala, nangona isenokuzisa amathuba okurhweba ngexesha elifanelekileyo.
"Ngomhla ka-Meyi, amaphondo, kunye nemimandla yaqala ukuvula amacandelo oqoqosho lwawo ngokwamanqanaba awohlukeneyo," utshilo umpapasho weendaba kwiStatistics Canada. "Nangona iinzuzo zango-Meyi zaye zathomalalisa ukwehla ngo-Matshi nango-Epreli, imisebenzi yezoqoqosho yahlala isezantsi nge-15% kunangaphambi kobhubhane ngoFebruwari."
Idatha yeMpembelelo yeNtengiso ipapashiwe
Le datha ayinampembelelo ibalulekileyo kwintsebenzo yeCAD xa ithelekiswa nabantu abakhuphisana nabo. Ngexesha lokubhala, isibini se-USD / CAD asitshintshanga ngaphezulu komhla ngo-1.3424. Ngamaxabiso eoyile ekrwada anyuka ngokuphakathi kwaye omelele kunokuba bekulindelwe, isaphulelo sinokwanela ukuxhasa ukuzuza okuthobekileyo kwimali enxulumene nempahla, i-CAD.
Nangona kunjalo, okunye ukuthengwa okulandelayo ngaphandle kwe-swing yasebusuku ephezulu, ejikeleze i-1.3460, kuya kufuneka kuncede abo babini bafumane kwakhona amanqanaba aphambili e-1.3500 engqondo. Kwelinye icala, ukuthoba amandla ngezantsi kwe-1.3400, okukhokelela kuqhawulo olulandelayo lwenkxaso ethe tyaba kwi-1.3385-80, kunokushiya isibini sisengozini yokwehla ukuya kwiiveki eziphantsi nge-1.3330.
tags Khanada, Imveliso Yomhlaba Yonyango (GDP), USDCAD
I-EURJPY Push ngaphaya kwe-124.00 yeNqanaba eliya kwi-2020 ePhakamileyo kufutshane ne-124.50 Uluhlu
Uhlalutyo lwamaxabiso e-EURJPY-Julayi 31
Ukufunyanwa kwakhona kwe-EURJPY kwawa kwakhona kufutshane nokuphakama kwe-2020, kuphuma umphunga ngaphambili kwiseshoni kwimimandla eyi-124.31. Ngaphandle kokuqhubeka kokulungiswa okungalunganga, isantya esongezelelekileyo sokuhlala sihleli kumakhadi kwaye kuqikelelwe ukuba sithathe ukuphakama kwe-2020 kufutshane ne-124.50 kuluhlu lwexesha elifutshane.
Amanqanaba okumelana: 128.67, 125.49, 124.43
Amanqanaba enkxaso: 123.37, 121.96, 119.31
I-EURJPY yexesha elide iTrend: Bullish
I-EURJPY idibanisa ngaphaya kwenqanaba le-122.87 kwaye kwinyanga ephelileyo ukuhlala phezulu kwinqanaba le-124.43. Umbono we-bullish kulindeleke ukuba uhlale ungaguquguquki kude kube ngokurhweba nge-EURJPY ngaphaya komndilili ohambahambayo we-13 kwinqanaba le-123.37.
Ngengqondo ebanzi, konke ukwehla kwinqanaba le-137.49 (eliphezulu) bekufanele ukuba sele kufezekisiwe kwinqanaba le-114.42. Ukunyuka ukusuka kwinqanaba le-114.42 kunokujolisa ekubuyiseleni indawo i-61.8 yeepesenti ye-137.49 ukuya kwi-114.42 kwinqanaba elilandelayo kwinqanaba le-128.67. Kunokubakho ukwahlula okuqhubekayo okuseta inqanaba kwinqanaba 137.59 (phezulu).
I-EURJPY yexesha elifutshane kwiTrend: Bullish
Ngokubhekisele kwiseshoni yexesha elifutshane namhlanje, abathengisi be-bullish banokuqhubeka nokuqhuba ngenqanaba lotshintshiselwano phezulu. Injongo enokubakho kwinqanaba le-124.80 ngoku lisondele kwiiyure ezi-4 zokuchasana nexesha. Ubandlululo lwangaphakathi nge-EURJPY luhlala lungathathi hlangothi kwaye kuqikelelwe ukuba lonyuke ngaphezulu.
Kwizinto ezilungileyo, ukophuka okuzinzileyo kwenqanaba le-124.43 kungaluqala kwakhona ukwanda ukusuka kwinqanaba le-114.42 ukuya kwi-61.8 yepesenti eqikelelweyo ukusuka kwinqanaba le-119.31 ukuya kwinqanaba le-125.49. Oko bekutshiwo, kwicala eliphantsi, ulwaphulo lwenqanaba le-121.96 emva koko liguqula i-bias iye kwicala elingezantsi lenqanaba lenkxaso ye-119.31.
Phawula: Ukufunda2.trade ayingomcebisi wezezimali. Yenza uphando lwakho ngaphambi kokuba utyale imali yakho kuyo nayiphi na iasethi eyimali okanye imveliso ebekiweyo okanye umsitho. Asinaxanduva lweziphumo zakho zotyalo mali
tags EURJPY, Uhlalutyo Technical
Igolide yokuGqiba iVeki nge-Bang
Igolide (i-XAU / i-USD) yatsibela kwinqanaba elitsha lonke ixesha elijikeleze i-1,984 yeedola kwiseshoni yokuqala yaseYurophu, ngaphambi kokubuyela ezantsi.
Ukulandela isilayidi sokuthatha inzuzo izolo, saya kwindawo eyi- $ 1,940, isinyithi esimthubi sakhawuleza sabuyela umva kwaye sisetelwe ukuphela ngeveki ngesitayile esihle. Inkunzi yenkomo ibonakalise iseshoni yeshumi yokulandelelana ngokulandelelana kwezi ntsuku zilishumi elinanye zidlulileyo kwaye yayiqiniswe ikakhulu yimvakalelo ebalaseleyo ejikeleze idola yaseMelika.
Ixhala lokuphela kwethemba lokubuyela kwimeko yezoqoqosho phakathi kwe-saga yaseCoronavirus iyaqhubeka nokunyanzelisa uxinzelelo lwe-bearish kwi-USD. Le nkxalabo iphinde yenziwa emva kokukhutshwa kwengxelo ye-US Q2 ye-GDP izolo, ebonise ukuba uqoqosho luthe lwathwala irekhodi elingama-32.9% ngonyaka. Oku kudityaniswe nengxabano yezopolitiko kumjikelo olandelayo wamanyathelo okhuthazo kuye kwayenza buthathaka i-USD kwaye kwaqinisa ukuthengiswa kwezinto zedola.
Oku kuza emva kwezimvo ze-FOMC ezingathandabuzekiyo ekuqaleni kwale veki zidityaniswe nokwehla okukhoyo kwizivuno zebond yaseMelika, eziqinisa ukomelela kwegolide.
Ukuqhubela phambili, abathathi-nxaxheba beemarike baya kujonga idokethi yezoqoqosho yase-US-ebonisa i-Core PCE Price Index, i-Personal Income / Spending data, i-Chicago PMI, kunye ne-Revised Michigan Consumer Sentiment-malunga neendlela zokuthengisa amathuba namhlanje.
Igolide (XAU) yeXabiso lokuQikelela kwangaphambili-nge-31 kaJulayi
I-XAU / i-USD Bias enkulu: Ukunyusa
Amanqanaba okubonelela: $ 1,983, $ 1,990, kunye ne-$ 2,000
Amanqanaba okufuna: $ 1,970, $ 1,960, kunye ne-$ 1,940
Igolide iye yaqhubela phambili kunye noqikelelo lwethu ukuza kuthi ga ngoku kwaye ikufuphi ekujoliseni i $ 2,000 ngakumbi nangakumbi. Inkxaso yangoko kwangoko inokufumaneka kwinqanaba le-1,970 leedola, nangona kunjalo, ukubuyela umva kwakhona kuya kuxhaswa ngamandla yidola ye-1960, eyenzeka njengendawo yokuhlangana komgca wenkxaso kunye nomkhondo wethu onyukayo.
Kule nqanaba, igolide ifuna ukubuya komnye wale mizila yenkxaso ukuyithumela kwakhona kuhambo lwayo ukuya kwinqanaba lama- $ 2,000, kodwa okokuqala, kufuneka sicime ukumelana ne- $ 1,983.
Phawula: I-Learn2.trade ayingomcebisi wezezimali. Yenza uphando lwakho ngaphambi kokuba utyale imali yakho kuyo nayiphi na iasethi eyimali okanye imveliso ebekiweyo okanye umsitho. Asinaxanduva lweziphumo zakho zotyalo-mali
tags igolide, iindaba, XAUUSD
I-USDCHF yehlela ukuLinga iNqanaba eliPhantsi leNzululwazi kwi-0.90
Uhlalutyo lwamaxabiso e-USDCHF-kaJulayi 31
Ngexesha leseshoni yaseYurophu yokuqala, isibini se-USDCHF sabona abanye bethengisa kwaye behla besiya ngasezantsi ngokwasengqondweni ngo-0.90- kwelona nqanaba lisezantsi ukusukela ngoMeyi ka-2015.
Amanqanaba okumelana: 0.9902, 0.9467, 0.9181
Amanqanaba enkxaso: 0.9047, 0.9000, 0.8969
I-USDCHF yexesha elide iTrend: Bearish
I-USDCHF izama ukwandisa ukusunduza kwayo phantsi kwezitshixo eziphambili ze-2018 kunye ne-Matshi 2020 ukuya kwinqanaba le-0.9000, ixhasa umbono wokuba ngoku singabona ukuvalwa kweveki nganye phantsi kweli nqanaba libalulekileyo.
Ukuvalwa phantsi kwe-Meyi 2015 ephantsi kwinqanaba le-0.9072 kunokubona inkxaso kwinqanaba le-0.9047, ngaphambi kwenqanaba lesithintelo se-0.9000, apho sinokubona ukuzama ukubamba. Kwinto elungileyo, uphawu lokuqala lokubhotela kwexesha eliphakathi iya kuba kukwaphula inqanaba lokumelana ne-0.9362.
Ukwehla kwe-USDCHF kude kube ngoku kuya kusiba kwinqanaba le-0.9056. Inqanaba lokuqikelela le-0.9081 ngaphezulu kwexesha eliphakathi sele lifikelelwe kodwa akukho nto ibonisa ukuba akukho nto. Kwicala elisezantsi, i-intraday bias iyaqhubeka.
Injongo elandelayo yexesha elizayo iya kuba yingqikelelo yeepesenti ezili-161.8 ukusuka kwi-0.9467 ukuya kwi-0.9370 kumanqanaba e-0.8969. Kwicala elingasentla, inqanaba elisezantsi lokumelana ngaphaya kwe-0.9151 linokuguqula ukungathathi hlangothi kwi-intraday bias kunye nokuqala kokubonelela ngozinzo, ngaphambi kokuba elinye icala elibi libangelwe.
Isalathiso sokudibanisa iShanghai SE (SHCOMP) esidityanisiweyo kuLuhlu oluQinisekayo phakathi kwamanqanaba 3200 kunye nama-3400
Iindawo eziPhikisayo: 3300, 3400, 3500
Iindawo eziNkxaso eziPhambili: 2800, 2700, 2600
Isalathiso seShanghai SE esiDityanisiweyo (i-SHCOMP) yexesha elide: UkuHamba
I-SHCOMP iyatshintsha phakathi kwamanqanaba angama-3200 kunye nama-3400 emva kokumelana kwayo kwinqanaba lama-3400. Ekuhambeni kwayo, isalathiso sivavanye inqanaba lama-3400 kabini, ngelixa lavavanya inqanaba lama-3200 kathathu. Isalathiso asihambi kodwa siyarhweba phakathi kuluhlu lwamaxabiso.
SHCOMP- Itshathi yemihla ngemihla
I-SHCOMP ikwinqanaba lama-53 lesalathiso samandla ahlobene. Kukwindawo ephezulu kwaye kungaphezulu komgangatho osembindini wama-50. Iintsuku ezingama-21 ze-SMA kunye nee-SMA zeentsuku ezingama-50 zithambeka emacaleni zibonisa indlela esecaleni.
I-Shanghai SE Index edibeneyo (i-SHCOMP) yeXesha eliPhakathi leNdlela: Ukulinganisa
Kwitshathi yeeyure ezi-4, isalathiso kukuhamba ecaleni. Emva kokuhla kwayo ukuya kwinqanaba lama-3200 nge-17 kaJulayi, isalathiso besisecaleni phakathi kwamanqanaba 3200 kunye nama-3400. Iyarhweba phakathi kuluhlu lwamaxabiso. Isalathiso siya kuhamba ukuba la manqanaba aphukile.
I-SHCOMP-4 Itshathi yeYure
Isalathisi seeyure ezingama-4 Ukufunda:
I-SHCOMP ingaphezulu kwe-40% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Ibonisa ukuba imarike ikwisantya esiphezulu. I-SMA yeentsuku ezingama-21 kunye nee-SMA zeentsuku ezingama-50 zithambeka ecaleni zibonisa indlela esecaleni.
Umbono ngokubanzi weShanghai SE Composite Index (SHCOMP)
Isalathiso se-SHCOMP sisadibanisa phakathi kwamanqanaba angama-3200 kunye nama-3400 ukusukela ngoJulayi 17.I-downtrend iya kuphinda iqale kwakhona xa amaxabiso eqhekeza ngaphantsi kwenqanaba lama-3200.
tags Isalathiso seShanghai SE esiDibeneyo, I-SHCOMP, Uhlalutyo Technical
I-USD / JPY ikummandla ogqithisileyo, abathengi kunokwenzeka ukuba bavele
Amanqanaba okuGxila aphambili: 111.00, 112.00, 113.00
Amanqanaba enkxaso aphambili: 104.00, 103.00, 102.00
I-USD / JPY yeXabiso leXesha elide: Ukuthwala
I-USD / JPY kukuhla okuye ezantsi. Ixabiso liphule ngezantsi kwenqanaba le-107.00 njengoko imarike iphinde yaqala ukuya ezantsi. I-Yen iwile kwaye isondela kwinqanaba le-104.25. Umzimba wekhandlela wokulungisa uvavanye inqanaba lokubuyisela i-0.786. Ibonisa ukuba iYen iya kuguquka kwinqanaba le-1.272 leFibonacci. Ukutshintsha kwe-USD / JPY ngekhe kube kwangoko.
I-USD / JPY-Itshathi yemihla ngemihla
I-SMA yeentsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 ze-SMA zihle ezantsi zibonisa intshukumo ye-bearish. I-Yen okwangoku ikwinqanaba lama-23 le-Index yamandla aRhoqo yemihla ngemihla. I-Yen iwele kummandla ogqithisileyo weemarike. Abathengi kunokwenzeka ukuba bavele emva kwethutyana.
I-USD / JPY Umndilili wexesha eliphakathi: Ukuthwala
Isibini se-USD / JPY sikwisiteshi esihla. Imakethi yawa kwaye yaqala kwakhona indlela esecaleni ngaphezulu kwenqanaba le-105.00. Emva kokuphinda uzame umgca wokumelana, i-downtrend yaqala kwakhona njengoko ixabiso lawela phantsi kwe-104.25. Iimarike ziye zafikelela kummandla ogqityiweyo njengoko abathengi banokuvela.
I-USD / JPY-4 Itshathi yeYure
Esi sibini siwele ngaphantsi kwe-20% yoluhlu lwemihla ngemihla. Kuthetha ukuba intengiso ikwindawo ethe kratya yentengiso. Abathengi sele bevele ukutyhala amaxabiso ukuya phezulu. Ii-SMAs zikwathambeka ezantsi. Ibonisa ukuhamba ezantsi.
Imbonakalo ngokubanzi ye-USD / JPY
I-Yen yaseJapan iwele kummandla ogqityiweyo. Uxinzelelo lokuthengisa luphelile njengoko abathengi bevela kwindawo ethe kratya. Ixabiso lisondela kumgca wokumelana, ikhefu elingaphezulu kokuxhathisa liya kukhawulezisa ukuhamba kwamaxabiso.
tags Uhlalutyo lwamaxabiso, USD / JPY
Izitayile zokulwa kwigumbi lemfazwe
Ukurhweba yinto enokhuphiswano olukhulu ebantwini, kodwa ikwanomvuzo omkhulu. Iimarike zezemali zinokuthelekiswa ngobuchule nebala ledabi; ke igumbi lokurhweba linokufaniswa "negumbi lokulwa," apho uthengisa khona. Amajoni aphumeleleyo kwiimarike zemali ngabo benza i-avareji yeenzuzo ezinkulu kuneelahleko eziphakathi. Aba ngabathengisi abaphumeleleyo
Ewe, eyona nto iphambili kukuba, senza i-avareji yenzuzo enenani elingaphezulu kwelahleko yomndilili. Leyo yeyona mfihlo iphambili- yenza imali engaphezulu kunokulahleka.
Nokuba yeyiphi indlela yokurhweba / isicwangciso / inkqubo oyisebenzisayo, ziya kuwela nakweyiphi na iindidi ze-5 ezidweliswe ngezantsi.
Izitayile zokulwa-iindlela zokurhweba
Olu luhlobo lokurhweba olwenza ukuba uthathe ithuba lokuhamba okuncinci kwixabiso. Nje ukuba isikhundla sakho sijike sibe yinzuzo, uphuma kwimarike kwangoko. Abahwebi abasebenzisa le ndlela bahlala besika imisebenzi yabo emva kokuba befumene nantoni na ukusuka ezimbalwa ukuya kwiipipi ezininzi. Bahlala kwiimarike okwembalwa ukuya kwimizuzu eliqela kwiimeko ezininzi; kwaye kunqabile ukuba bahlale kwimarike ngaphezulu kweeyure ezimbalwa kakhulu. Ukuba umgwebi wenza i-10 yeedola ngombhobho ococekileyo, kwaye baqokelela iipipthi ezi-3 ukuya kwezi-5 kurhwebo ngalunye, ungacinga ukuba baya kwenza malini xa besenza urhwebo oluyi-10 ngosuku.
Ngosuku lwangaphakathi kuthetha "ngaphakathi kwemini." Ke urhwebo lwangaphakathi luyindlela yokuthengisa eyenza ukuba ungene kwimarike kwaye uphume kwangolo suku lunye. Ikwabizwa ngokuba YIMIHLA YOKUGQIBELA. Ngokwenza oku, uvula indawo kwaye uyivale ngaphakathi kweeyure ezimbalwa kunye neeyure ezingama-24 ubuninzi. Ngethuba nje uvula amashishini kwaye uvale ngaphakathi kosuku, ungumrhwebi we-intraday okanye umrhwebi wosuku. Urhwebo lwangaphakathi ngaphakathi luyakwenza ukuba ubambe ukusuka kumashumi epip ukuya kumakhulu epips ngosuku, kuxhomekeke kwimeko yentengiso.
Le yindlela yokurhweba apho kuthengiswa isixhobo semali ngaphakathi kosuku olunye ukuya kwiiveki ezininzi. Urhwebo lokujija luhlala luvulekile ngaphezulu kosuku olunye ukuya kwiintsuku ezimbalwa; okanye ukusuka kwiintsuku ezimbalwa ukuya kwiiveki ezininzi. Xa uvula urhwebo ngosuku kwaye ungawuvali kwangolo suku lunye, uya kuba ngumrhwebi ojijayo. Ukuxhamla kwimarike 'ukutshintsha,' kuthetha ukuba ufuna ukuvuna ukusuka kumashumi iipip ukuya kumawaka epipi kwiintsuku okanye iiveki.
Indawo yokurhweba yindlela yokurhweba rhoqo apho uvula khona urhwebo kwaye ulushiye ubuncinci kwinyanga enye. Urhwebo (s) lunokuhlala luvulekile iinyanga ezimbalwa ukuya kwiminyaka embalwa okanye iminyaka embalwa. Olu hlobo lokuma lwenza ukuba abadlali beemarike zesigulana bakwazi ukwenza iinzuzo ezininzi kangangoko kunokwenzeka kwi-bias edlulileyo, nokuba yeyokunyusa okanye yokuqina. Ingxolo yokudlula kwiimarike ayikhathalelwa. Isikhundla somrhwebi esihambe ixesha elide kwi-AUDUSD ngasekupheleni kuka-Matshi 2020 kwaye sayigcina de kwaphela uJulayi 2020, ngeyenze inzuzo ecocekileyo ubuncinci be-1,450 pips (malunga ne-14,500 yeedola ukuba usebenzisa amaqashiso asemgangathweni).
Yindlela elula apho wabela khona imali kwizixhobo ezithile ezinethemba lokubuya kwikamva. Utyalomali lunokuhlala ukusuka kwiminyaka embalwa ukuya kumashumi eminyaka, nkqu kwiinkulungwane. Ukuba utyale imali kwi-Nasdaq 100 (NDX) ngo-2003 kwaye wayibamba ukuza kuthi ga ngoku (unyaka ka-2020), ngewawuzuze malunga nama-1,000,000 100 amanqaku (ewe, amanqaku asisigidi), kwaye oku kubonakala ngathi sisiqalo. Uyazi ukuba yintoni inzuzo yamanqaku ayi-1.0 ajongeka ngathi ngokwedola yase-US, ukuba usebenzisa amaqashiso e-XNUMX. Eyona ndlela yokufumana inzuzo enkulu kwizabelo, ii-indices, isinyithi esixabisekileyo, i-cryptos njl, kukuyibamba ngonaphakade, ngaphandle kwengxolo, izilungiso ze-bearish kunye nokubuyela umva endleleni. Emva kwayo yonke loo nto, akukho mali yotyalo-mali iluncedo ngaphandle kokuba ivele kumyolelo wakho (oza kufunyanwa ekugqibeleni ngabantu abaxhomekeke kuwe kunye / okanye kubaxhamli).
tags Trading Day, utyalo, indawo yokurhweba, Scalping, Ukuguquka
I-Australia i-200 (AU200AUD) iseZantsi, kwaye inokubuyela umva kwinqanaba le-6000
Ukuhlaziywa: 30 Julayi 2020
Iindawo eziKhuselekileyo: 7000, 7100, 7200
Iindawo eziNkxaso eziPhambili: 6100, 6000, 5900
I-Australia 200 (AU200AUD) yexesha elide iTrend: Ukurola
Isalathiso sitshintsha phakathi kwamanqanaba 5800 kunye nama-6200 ukusukela ngoMeyi. Okwangoku, ukuguquguquka kuphakathi kwinqanaba lamaxabiso. Ixabiso liyehla kwaye emva koko, ukunyuka okuphezulu kuya kuqhubeka. Okwangoku, ukuhamba kwamaxabiso kuhamba kancinci kwaye kungabalulekanga.
I-AU200AUD-Itshathi yemihla ngemihla
I-SMA yeentsuku ezingama-21 kunye nee-SMA zeentsuku ezingama-50 zijongela ecaleni ezibonisa ukuhamba ecaleni. Isalathiso siwele kwinqanaba lama-54 le-Index ye-Relative Strength Index 14. Oku kubonisa ukuba intengiso ikummandla wonyuselo nangaphezulu kweziko lama-50.
I-Australia 200 (AU200AUD) yeXesha eliPhakathi leNdlela: Ukulinganisa
Kwitshathi yeeyure ezi-4, isalathiso safikelela kwinqanaba eliphezulu lama-6200 saphinda saqala kwakhona isihla esisezantsi. Izihlandlo ezithathu, ixabiso lilungisiwe laya phezulu kodwa i-downtrend yaqhubeka ukuya kwinqanaba lama-6029. Isiphatho sesibane savavanya inqanaba lokubuyisa le-0.786. Ibonisa ukuba intengiso iya kuwa kwaye ibuye umva kwinqanaba lokunyusa le-1.272. Nangona kunjalo, ukubuyela umva akuyi kuba kwangoko.
I-AU200AUD-Itshathi yeeyure ezi-4
I-AU200AUD ingaphantsi kwe-40% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Ibonisa umfutho we-bearish. I-SMA yeentsuku ezingama-21 kunye nee-SMA zeentsuku ezingama-50 zijike ngokuthe tye njengoko imarike iqhubeka nokuhamba kwayo ecaleni.
Imbonakalo ngokubanzi yeAustralia 200 (AU200AUD)
I-Australia i-200 isatshintsha-tshintsha kodwa ukuya ezantsi. Ukudodobala kuya kunabela kwinqanaba le-1.272 yokwandiswa kweFibonacci. Ngamanye amagama, imakethi iya kufikelela kwinqanaba eliphantsi le-6000. Ixabiso liya kubuyela umva kwaye libuyele kwinqanaba le-0.786 yenqanaba lokubuyisela i-Fibonacci.
tags AU200AUD, Australia 200, Uhlalutyo Technical
I-Nasdaq 100 yokuRekhoda iiNkqubela phambili eziLandelayo emva kweeNgxelo zeFed
Imarike yemasheya yase-US ibikuluhlu lokudibanisa uninzi lwangoLwesithathu ngenxa yolindelo lwesigqibo samaxabiso eFed, kuphela ukuphela kosuku kwisimo esomeleleyo sokuthengisa njengoko abatyali zimali bebhiyozela ithoni yebhanki esembindini.
Ngelixa imeko yeFed inokubangela ukuba idola yaseMelika iyeke nangakumbi kwaye- ngokusekwe ekuphenduleni kwintengiso izolo- kubangele ukuba iNasdaq 100 (NDX) icime ezinye iinzuzo.
Oko kwathethi, intengiso iya kunikwa ixesha elincinci lokuzinza njengoko ezinye zezona zinto ziphambili kwezobuchwephesha kwimigca yokuxela umvuzo wabo xa kuvalwa imakethi namhlanje.
Idityanisiwe, iAmazon (NASDAQ: AMZN), iApple (NASDAQ: APPL), uGoogle (NASDAQ: GOOGL), kunye neFacebook (NASDAQ: FB) iakhawunti malunga neepesenti ezingama-35 zeNasdaq 100 yonke kwaye bezizezinye zezona ziphezulu. Ixesha leCoronavirus. Ngenxa yoko, kunokulindeleka ukuba ingxelo yomvuzo isenokwenzeka ukuba iyinkohliso, enokuthi inciphise ezinye iinzuzo ze-NDX kungekudala.
Oko kwathiwa, abathathi-nxaxheba beemarike baya kujonga ukuphindaphinda kabini kwi-bullish stance kwaye bakhwele i-uptrend elindelekileyo kwi-Nasdaq 100. Nangona kunjalo, abanye abathengisi bakholelwa ukuba kukho iimpawu ezibonakalayo zokunyusa.
I-Nasdaq 100 (NDX) yeXabiso lokuQikelela - nge-30 kaJulayi
I-NDX enkulu ye-Bias: Ukunyusa
Amanqanaba okubonelela: I-10895.5, 11068.1, kunye ne-11307.5
Amanqanaba okufuna: 10377.8,10191.8, kunye ne9901.3.
I-NDX iyaqhubeka ukubamba izinzile kwisitishi sethu esinyukayo kwaye ijongeka ikulungele ukuthatha amanqanaba okuxhathisa angaphambili. Ngokunikwa izinto ezisisiseko ezijikeleze intengiso, sinokubona ithegi yexabiso le-10800 kungekudala.
Inkxaso ekhawulezileyo inokufumaneka kwinqanaba le-10500, elisisiseko sendlela yethu enyukayo. I-NDX inokubafumana abathengi bediphu kwelo nqanaba, elinokuthi liyityhalele phezulu.
Ngapha koko, isibonisi sethu seMACD sipeyinta umfanekiso ophucukileyo wokunyuka okuzayo okuza kubakho ubungqina eNasdaq 100. Nangona kunjalo, ikhefu elizinzileyo elingaphantsi kwe-10191 linokuba yingozi kwiinkunzi ze-NDX.
tags I-Nasdaq 100, NDX, iindaba